Wasiir beeniyey in musuq-maasuq loo xiray maanta – Kalfadhi
Wasiir beeniyey in musuq-maasuq loo xiray maanta
Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada, Maxamed Cabdullaahi Salaad (Oomaar), ayaa u sheegay warbahainta in ay been tahay in loo xiray maanta musuq-maasuq uu sameeyey darteed. Waxa uu warka sidaas sheegaya ku tilmaamay qormo been auur ah, oo uu isaguba ka arkay warbaahinta.
“Waa been. Wax la saxiixay waqtigii 2014-tii waaye. Waqti aan aniga joogay maaha” ayuu yiri Wasiir Oomaar, oo u warramay Radio Dalsan. Waxa uu markaas ka jawaabayey warar maalmahaan baraha bulshada lagu daabacayey, oo sheegayey inuu lacaga qaran lunsaday.
Wasiirku waxa uu sheegay ineysan jirin cid soo dacweysatay iyo xarig lagu sameeyey maanta toona. “Runtii aniga maanta iskadaayee, xataa waligeey leyma xirin” ayuu yiri Oomaar. Waxa warka uu beeninayo ku tilmaamay ruwaayad. “Waa ruwaayad si fiican loo jilay oo aan arkayey qoraalo dad lacago looga qaatay oo leygaga been sheegayay” ayuu yiri Wasiirku.
Hadal-haynta sheekadiisa waxaa xiisa u yeelay Dowladda Farmaajo oo horay u xirtay Wasiir iyo Agaasime lagu soo eedeeyey iney musuq sameeyeen, kuwaas maxkamado la soo taagay. Hase ahaatee, Wasiirka ayey maxkamaddu sii deysay markii wax lagu waayey.
Sanatar Xuseen: Bakool Waxaa La Ogaadaa Marka ay Talo Gacanta Ka Baxdo!
Xildhibaan warsame Joodax oo ka badbaaday qaraxyadii maanta